China harimitsu squid jig fekitori uye vagadziri | Rwizi Rwizi
1.Tiri chigadzirwa chakazvitsaurira chinogadzira, isu tinokwanisa kuburitsa dzakaomarara, zvipunu,. Kuchengetedza kunotsigirwa, uye ndokumbira uve nechokwadi chekuti ruzivo rwechigadzirwa chako rwakachengetedzwa chaizvo uye haruzoburitswa.
2. Tine edu maR & D, dhizaini, kugadzira uye zvikwata zvekutengesa.
3.Vashandi vekambani yedu vekunze vanotengesa sevhisi vashandi vanogona kusangana nyore nyore nezvako zvekutenga, uye isu tinotenda kuti mutengi wese mutengi akanaka watinoremekedza.
4. Isu tinovimbisa kuti tichabata nekubvunzana kwako uye mibvunzo yese mukati maawa makumi maviri nemana
Squid Jig Kukwezva
Pashure: Yamashita squid jig yakawanda
Zvadaro: Sumizoku squid jig
Yakanakisa squid Jig Kwehusiku
Inopenya squid Jig
Squid Kubata Jig
Yo Zuri squid Kukwezva
Yamashita squid jig kutengesa